Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » trending Ugbu a » Otu esi emeso ndị ahịa siri ike?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ọtụtụ ụwa na-ahụ ụdị oke mmiri ozuzo ma ọ bụ igbu oge njem metụtara ihu igwe. Ndị a na -ebute ndị ọbịa iwe na mkpa ịrụgharị ụdịrị usoro njem.
Kedu ihe na -akpasu ndị ahịa iwe?
N’ebe ugwu, a na -akpọkarị ọnwa Ọgọst “ụbọchị nkịta ”nke oge ọkọchị. Aha a sitere na eziokwu na ọ na -adịkarị oke oke ọkụ maka na nkịta chọrọ ịwagharị n'okporo ụzọ.
Ọgwụgwụ oge ọkọchị bụkwa oge njem nlegharị anya n'ọtụtụ ụwa. Industrylọ ọrụ njem na -atụ anya na mgbe nnukwu ndakpọ akụ na ụba nke afọ gara aga na 2021 ga -abụ oge mgbake.
Ọ bụrụ na ọgwụ mgbochi arụ ọrụ mgbe ahụ 2021 nwere ike ịbụ oge ụgbọ elu na ụlọ oriri juru eju, na akwara ndị ọbịa na -adakarị. Nke a bụ ọnwa mgbe ihe, ọtụtụ mgbe karịa ọkachamara ọkachamara njem nlegharị anya, na -eyikarị ka ọ na -agahie.
Ọgọstụ bụ ọnwa dị mma ịtụle ihe na-akpasu ndị ahịa anyị iwe, otu esi eme ka iwe ghara ịdị ọkụ, yana otu esi ejigide njikwa oge a na-achịkwaghị achịkwa, dị ka igbu oge metụtara ihu igwe. N'oge njem nlegharị anya dị elu, were ohere nwalee nka gị n'ịtụgharị ọnọdụ ndị siri ike ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma na ịmụ ka esi ewelata iwe ma mụbaa ngwaahịa na afọ ojuju ndị ahịa. Iji nyere gị aka ịlanarị oge a siri ike na njem nlegharị anya, tụlee ihe ndị a:
Cheta na, n'ụwa njem nlegharị anya, enwere ike inwe esemokwu na enweghị afọ ojuju ndị ahịa.
N'agbanyeghị ihe ị na -eme, a ga -enwe ndị chọrọ karịa ma ọ bụ enweghị obi ụtọ n'ihe ị na -eme. Ndị ọbịa na -akwụ nnukwu ego maka ezumike ha ma chọọ inwe mmetụta na -achị ha, ọbụlagodi n'ọnọdụ onye ọ bụla na -enweghị ikike ọ bụla. Zụlite ọnọdụ nke onye ahịa nwere ikike ịchịkwa n'agbanyeghị obere. Dịka ọmụmaatụ, kama ịsị naanị na enweghị ike ịme/mezuo ihe, nwaa ịza nzaghachi dịka ihe nwere ike ime.
Mgbe ị na-enye ụzọ ndị a, gbaa mbọ hụ na ndị na-arụ ọrụ n'ihu na-amụ anya mgbe niile ma gosipụta ndidi. Ọtụtụ mgbe, enwere ike iwepụ nsogbu njem ọ bụghị site na idozi nsogbu niile, mana site n'ikwe ka onye ahịa chee na ọ nwetala mmeri opekata mpe.
-Mara ike gị iwu, nke mmetụta uche na nke ọkachamara.
Enwere ọtụtụ ihe mere ndị mmadụ ji eme njem, ụfọdụ maka ihe ụtọ, ụfọdụ maka azụmahịa, ụfọdụ maka ọhaneze. Maka ndị nọ n'òtù ikpeazụ, ọ dị mkpa na ndị ọkachamara na -ahụ maka njem nlegharị anya ghọtara ike 'ọnọdụ ọha'. Ndị a bụ ndị na -anaghị achọ ịnụ ngọpụ.
Ha na -adị ngwa iwe ọsọ ọsọ, ha adịghịkwa agbaghara mmehie. Na -emeso ha, mara ihe na -akpasu gị iwe na mgbe ị ruru oke gị. Mara ihe nke ọma ịmata mgbe nsogbu na -amalite na enyemaka ga -adị mkpa.
- Bụrụ ịchịkwa onwe gị.
Njem nleta bụ ụlọ ọrụ na-agbagha echiche nke onwe anyị. Ọhaneze nwere ike bụrụ ndị na -achọ ihe na mgbe ụfọdụ adịghị mma. Ọtụtụ mgbe, ihe omume na -eme nke na -esiteghị n'aka anyị. Ọ bụ n'oge ndị a ka ọ dị mkpa ijikwa egwu na mmetụta mmadụ.
Ọ bụrụ na okwu gị na -egosipụta otu echiche ma asụsụ ahụ gị ekwuo nke ọzọ, n'oge na -adịghị anya ị ga -atụfu ntụkwasị obi.
-Tourism chọrọ ọtụtụ akụkụ dị iche iche.
Njem nleta na -achọ ka anyị mụta otu esi agbagharị ọtụtụ ihe na mkpa na -enweghị njikọ n'otu oge. Ọ dị mkpa na ndị ọkachamara na -ahụ maka njem na -azụ onwe ha na nka nke ijikwa ozi, njikwa ihe omume na ịnagide ụdị mmadụ.
N'ime oge ihe isi ike, ọ dị mkpa ka ndị nọ n'ihu n'ihu nwee ike ịmegharị nkà atọ niile n'otu oge.
- tourga njem nleta na-aga nke ọma na-eweta ihe ha kwere na nkwa.
Njem nlegharị anya na-enwekarị ịre ahịa nke ukwuu na nkwa nke ihe ọ na-agaghị emeli. Ya adịla mgbe ị ga -ere ngwaahịa nke obodo/mmasị gị anaghị enye.
Ngwaahịa njem na -adigide na -amalite site n'ịzụ ahịa n'eziokwu.
-Ndị isi njem nlegharị anya na -aga nke ọma maara mgbe ha ga -ajụ ajụjụ ebumpụta ụwa ha. Nghọta nwere ike bụrụ nnukwu enyemaka, ọkachasị n'oge nsogbu.
Otú ọ dị, dabere naanị n'ọmụmụ ihe, ọ pụrụ ịkpata nsogbu. Jikọta ihe ọmụma ebumpụta ụwa na data siri ike. Mgbe ahụ tupu ịme mkpebi, hazie data data abụọ n'ụzọ ezi uche dị na ya.
Ebum n'uche anyị nwere ike ịnye oge amamịghe ndị a, mana n'ọtụtụ oge na -eji dabere mkpebi gị na data siri ike na ezigbo nyocha.
-Azụmaahịa njem na -aga nke ọma na -arụ ọrụ n'ịgbaghasị ọnọdụ siri ike kama ịchịkwa ya.
Ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nlegharị anya achọpụtala na esemokwu na-abụkarị ọnọdụ ida. Ezigbo ihe ịga nke ọma na -abịa n'ịmara ka esi ezere esemokwu. N'oge iwe, dịrị njikere iche echiche n'ụkwụ gị.
Otu ụzọ isi mụta nka iche echiche n'ụkwụ mmadụ bụ site n'ịzụlite ọnọdụ esemokwu na ọzụzụ maka ha. Ọzụzụ ndị njem anyị na ndị ọrụ ihu dị mma nke ọma zụrụ nke ọma, ọ ga -aka mma ka ha nọrọ na njikwa nsogbu na ime mkpebi dị mma.
-Mara ebe na-agbanwe agbanwe ma mara ka esi achọ ohere site n'oge ihe siri ike ma ọ bụ na-ejighị n'aka.
Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na esemokwu, jide n'aka na ị ga -edozi ya n'emebighị ego onye ahịa gị. Mara onye na -awakpo gị aka n'ụzọ na -enye onye ahịa iwe iwe ka ọ hụ mmejọ ya na -enweghị ihu.
Cheta na nsogbu nwere ma ihe egwu ma ohere. Chọọ ohere na nsogbu azụmaahịa njem ọ bụla.
-Gbalịa ime ka onye ahịa were iwe bụrụ akụkụ nke otu gị.
Mgbe ị na -achọ imeri onye ahịa na -ewe iwe, jide n'aka na ị ga -ejigide ezigbo anya na -ele anya ma nwee echiche dị mma n'okwu ị na -eji na ụda okwu ị na -arụ.
Kwe ka onye ahịa zụọ ahịa mbụ wee kwuo naanị mgbe emechara ọkwa ikuku, na -enye onye ahịa ohere ịpụ, n'agbanyeghị etu okwu ya siri dị ike, bụ ụzọ dị mma iji gosi na ị na -akwanyere ya ùgwù ọbụlagodi na ị kwenyeghị.
Kedu njem dị ize ndụ? Jụọ Dr. Peter Tarlow! nke SaferTourism:
Dr. Peter Tarlow bụ ngalaba-guzobere ngalaba Network Njem Nleta Ụwa, otu ndị otu zuru ụwa ọnụ na ndị ọkachamara na -ahụ maka njem nlegharị anya na ọha na nkeonwe na mba 127 dị ka ndị otu.
Maka ozi ndị ọzọ na ịbụ ndị otu, gaa www.wtn.travel
Dr. Tarlow na -edukwa njem nlegharị anya na -adịghị ize ndụ, onye otu Ndị otu TravelNews na ụlọ ọrụ ndụmọdụ. More na www.safertourism.com
October 20, 2021 na 13: 37